May 2021 - Cele Fans
May 31, 2021 Cele Fans 0
မကွေးတိုင်း ရေစကြိုမြို့နယ်က မအူရွာ (အလယ်)ရဲ့ အမွေအနှစ်တွေထဲကတစ်ခု။ သော့ပေါင်း (၁၃) ချောင်းကိုကျော်ဖြတ်ပြီးမှရွှေဆင်းတုဘုရားကို ပူဇော်ကန်တော့ခွင့်ရမယ်။ ရွှေဆင်းတုဘုရားကို ဖူးမြော်ဖို့ဆိုရင် ဂေါပက (၅) ယောက်ဆုံပြီး သော့ငါးချောင်းနဲ့ ပထမတဆင့်ကိုဖွင့်ပြီးမှ ဒုတိယတံခါးကသော့သုံးချောင်း ကိုထပ်ဖွင့် အဲ့လိုဖွင့်ပြီးမှ ဘုရားရှင် စံမြန်းတဲ့ မီးခံသေတ္တာဆီရောက်တယ်။ အကြိုက်ဆုံးကတော့ ပထမဆုံးပုံမှာ ပြထားတဲ့ မီးခံသေတ္တာတံခါး။ရှေးတံခါး သော့ငါးချောင်းလုံး ထည့်ပြီးမှ lock တွေတစ်ခုခြင်းလိုက်လှည့်ပြီး အားလုံးစုံမှပွင့်တာ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီ ခုထိမပျက်မစီးကျန်တယ်။ သုံးလို့လဲရတယ်။ တကယ့်စက်မှုအမွေအနှစ်တစ်ခုပဲ။ […]
ကြွက် ပြေးသော နည်းလေးကြွက်တွေက ပေါလိုက်တာ့ ပေါတာမှ စာအုပ်တွေကိုက် အဝတ်တွေကိုက်ညကျတော့ တစ်ဝုန်းဝုန်းနှင့် လိုက်တမ်းပြေးတမ်းကစားကြ ၊ကျိန်းမရအောင်ဖြစ့် တစ်ကောင်နှင့်တစ်ကောင်လှမ်းအော်ကြတစ်ခါ တလေများဆို ပြေးရင်းလွှားရင်းခြင်ထောင်အမိုးပေါ်ဒိုင်ဘင်ထိုးချ လွန်တာမှအတော်လွန့်အဲ့ဒါနှင့်ကလေးတွေက ထောင်ချောက်ထောင်မယ် လျှောက်တယ့်မလုပ်နှင့် ဆေးကျွေးမယ်ဆိုတယ့်လုံးဝမလုပ်နှင့်ပေါ့….အဲ့ဒါနှင့်တစ်နေ့ကျတော လက်မောင်းအောင့်လို့လင်ဇီးဒါဏ်ကြေဆေးလိမ်းတယ့် ပူလိုက်တာ့..အခိုးကလည်း မွှန်ပြီးမျက်ရည်ကျတယ့် လူတောင်အနံ့ခိုးရတာနှင့်မျက်ရည်ကျရတယ် ဟိုအကောင်တွေ(ကြွက်)ဆိုဘယ်လိုနေမလဲမသိသူတို့နှာခေါင်းကရှေရောက် နေ တာဆိုတော့ ပိုပြီးအနံ့ရမှာပဲဆိုပြီးစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျောင်းသားသုံးယောက်ခေါ် ကြွက်လာလမ်း လျှောက်လမ်းတွေ လင်ဇီးတွေ ထူထူသုတ်ပြီး အသာနေလိုက်တာ့ ည(၁၀)နာရီလောက်ကျတော့ သောင်းကျန်းဖို့လာနေကြ အချိန်အတိုင်း ကြွက်တစ်အုပ်ရောက်လာပါရော့ရှေ့ဆုံးကအကောင်က သုတ်ထားတဲ့လင်းဇီးနှင့်နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့တွေ့ပြီးကြမ်း […]
ဘီဘီစီနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ပြည်သူတွေအတွက်အားတက်စရာစကား ဒေါက်တာဆာဆာပြောပြီ
ကမ္ဘာ့မီဒီယာ BBC နှင့် Dr. ဆာဆာ Interview အားတက် အားရစရာ သတင်းများ (၁)မေးခွန်း == ကျမ ပထမဆုံးမေးချင်တာက Dr. ဆာဆာ အနေဖြင့် ဘာကြောင့် စစ်အစိုးရလို့ မသုံးနူန်ူးပဲ စစ်အာဏာရူး အုပ်စုလို့ သုံးနူန်း ခေါ်ဆိုရသလဲ? ဖြေ== ဒါကတော့ ထွေးထွေးထူးထူးပြောစရာမလိုပါဘူး သူတို့ အုပ်စုက အာဏာရူးလွန်းလို့ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေရဲ့ မဲ (vote) တွေတောင် လေးစားမူမရှိနိူင်တော့ပဲ […]
ဂရန်အတု.. ဂရန်အစစ်… လွယ်ကူစွာခွဲခြားနည်း
ဂ ရန် အတု ဂရန်အစစ် အားအောက်ပါအချက်များဖြင့်ခွဲနိုင်ပါသည်ဂ ရန် မျက်နှာဖုံးက သားရေအစိမ်းရင့်ပါ တွန့်ကြေခြင်းမရှိပါ ဌာနတံဆိပ်မှာ ရွှေရောင် လက်နှင့်ပွတ်ကြည့်လျင် ကြမ်းပြီး ဖောင်းကြွ ဖြစ်ပါတယ် အိုးအိမ်ဂရန် မှာ အပြာရောင်ပါ ( အတုမှာနက်ပြာရောင်သို့မဟုတ်အစိမ်းပုတ်ရောင်ဖြစ်ပြီးဌာနတံဆိပ်မှာကြမ်းမနေပါ ) ဌာ န တံဆိပ်ရေစာ မှာအပြာနုပါ ထင်ရှားပြီး မှုံဝါးမနေ အရောင်မှာအရမ်းတောက်ပမနေပါ စာ အုပ် ချုပ် ထားတဲ့ချုပ်ရိုးမှာ သက်သက်ရပ်ရပ်ဖြစ်နေပြီး အပ်ပေါက်ရာနှင့်ချုပ်ထားသောချုပ်ရိုးစများအပြင်သို့ထွက်မနေပါ (အတုမှာချုပ်ထားသောကြိုးစများထွက်နေပြီးကြိုးထက်အပ်ပေါက်ရာကကြီးနေတက်ပါတယ်) […]
၁။ ဘာသာစကား……မြန်မာလူဦးရေ သန်း ၆၀ စလုံး အင်္ဂလိပ်စာ ကျွမ်းကျင်နေဖို့ မလိုပါဘူး။ ဂျပန် ထိုင်း တရုတ် တို့မှာလည်း ပြည်သူတိုင်း အင်္ဂလိပ်စာ မကျွမ်းကြပါဘူး သို့သော် နိုင်ငံအုပ်ချုပ်သူ ခေါင်းဆောင်များ လူကြီးများကတော့vocabulary,pronunciation,intonation, tone, grammar, usage, က အစ ကျွမ်းကျင်နေရမှာပါ။ ဒါမှ နိုင်ငံတကာနဲ့ ဆက်ဆံလို့ အဆင်ပြေမှာပါ။ ဒီအရည်အချင်းအမေစုမှာ၁၀၀% ရှိတယ်။ ၂။ ဗသုသုတ…something special, everything […]
သက္ေတာ္၉၄ ႏွစ္ရွိ သက္ေတာ္ရွည္ ျမကင္းေတာင္ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးကို တပည့္ ကပၸိယ က “ကေလးေတြ ေသေနပါၿပီ ဘုရား” လို႔ ေလွ်ာက္ထားလို႔ မေန႔က ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ေပးလိုက္တဲ့ က်ည္ကြင္း ဂါထာပါ… “ဂစၦ အမုမွိ” ကို “ဂစ္ဆအမုန္မွိ၊ တိတ္ထာဟိ” ဟု ဖတ္ေပးပါ… လူတိုင္း႐ြတိလဲ႐ြတ္ပါ။ စာ႐ြက္မွာေရးပီးအက်ီအိတ္ထဲထည့္ထားပါ။ အိမ္ေတြမွာလဲကပ္ထားၾကပါ 🙏🏻 အားလုံးေဘးအႏၲာရာယ္ကင္းၾကပါေစ 🙏🏻 ———————– သက်တော်၉၄ […]
သိထားသင့်တယ် သွေးကျဆေးမှန်မှန်မသောက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ၊ သွေးကျဆေးစွဲသောက်ရင်ကျောက်ကပ်ပျက်လားဆိုတဲ့ အမေးများနေလို့ ဖတ်ကြည့်စေချင်လို့ပါ အယူမှန်ကန်..ရောဂါဒဏ်..အမြန်ကင်းဝေး..ကျန်းမာရေး..”သွေးတိုးရောဂါကိုသဘောပေါက်စေချင်တယ်” “သွေးကျဆေးမှန်မှန်သောက်သင့်တယ်ဆိုတာကိုလည်းအမြင်မှန်ရစေချင်တယ်” အမည်..ဒေါ်နွဲ့မူ အသက်..၆၈..နှစ်.. ခေါင်းတအားမူး.. တအားမောနေတဲ့အပြင်.. ရင်ဘတ်ထဲဆို့ကြပ်နေလို့.. ဆေးခန်းရောက်လာပါတယ်.. သွေးအချိုဓာတ်.. သွေးတွင်းအောက်စီဂျင်ရာခိုင်နှုန်း..သွေးခုန်နှုန်း..တွေ..ပုံမှန်ပါပဲ..သွေးပေါင်ချိန်ကတော့..190/110mmHg..ရှိသင့်ရှိထိုက်တာထက်..အလွန်မြင့်တက်နေပါတယ်.. ယခုနောက်ဆုံး..WHO..World Health Organization..ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီးရဲ့..သတ်မှတ်ချက်အရ..Blood Pressure..သွေးပေါင်ချိန်သည်..120/80mmHg..ကိုသာအမှန်လို့..သတ်မှတ်ထားပါတယ်.. 140/90mmHg..ဆိုရင်တောင်..သွေးတက်နေပြီလို့သတ်မှတ်နေရပါပြီ.. ECG..ဆွဲကြည့်တော့..Left Ventricular Hypertrophy..ဘယ်ဘက်နှလုံးကြီးနေတယ်.. သွေးတက်နေတာမသိဘူးလား..သွေးပေါင်မချိန်ကြည့်ဘူးလား..မေးတော့..သိတယ်တဲ့..မကြာခဏလည်းချိန်ကြည့်တယ်တဲ့.. ဒါဖြင့်..သွေးကျဆေးမှန်မှန်မသောက်ဘူးလား..မေးတော့..©သွေးတက်မှသောက်တာတဲ့..ဘာလို့..သွေးတက်မှသောက်တာတုန်းဆိုတော့..©သွေးနည်းသွားမှာစိုးလို့တဲ့.. ©သွေးကျဆေးသောက်တာကြာလာရင်..ကျောက်ကပ်ပျက်တတ်တယ်ပြောကြလို့..ကြာကြာစွဲမသောက်ရဲလို့..မသောက်ဘူးတဲ့.. ©သွေးတက်မှာစိုးလို့..အားဆေးလည်း..မသောက်ရဲဘူးတဲ့.. အယူအဆမှားတွေ..အယူအဆမှားတွေ..ဒေါ်နွဲ့မူ..လိုအယူအဆမှားတွေကို..အမှန်ယူပြီး..သွေးတိုးရောဂါရှိနေပါလျက်..ဆေးမှန်မှန်မသောက်ပဲ..ရောဂါဆိုးရွားနေတဲ့လူတွေ.. ဘယ်လောက်များနေပြီလဲ.. ©သွေးပေါင်တက်..သွေးဖိအားတက်..သွေးတိုးနေရင်..သွေးကျဆေးကို..အမြဲစွဲစွဲမြဲမြဲသောက်ရပါမယ်.. သွေးတက်နေမှ..တက်နေတုန်း..သောက်ရမှာမဟုတ်ပါ..©သွေးကျဆေးသောက်ရင်..ရှိနေတဲ့သွေးတွေနည်းမသွားပါ..©သွေးကျဆေးသောက်တာကြာလာရင်..ကျောက်ကပ်ပျက်တတ်တယ်ဆိုတာ..လုံဝမှားယွင်းနေပါတယ်.. ©အားဆေးသောက်ရင်..အားဆေးထိုးရင်..သွေးမတက်ပါ..ဘာမှမဆိုင်ပါ.. Blood Pressure..သွေးပေါင်ချိန်သွေးဖိအားအကြောင်းကို..နားလည်အောင်ပြောပြပါမယ်..သွေးပေါင်ချိန်အကြောင်းသိရှိသဘောပေါက်ပါမှ..အမှန်မြင်နိုင်ကြမှာပါ.. အဆုပ်များမှသန့်စင်ပေးလိုက်သော..အောက်စီဂျင်ဓာတ်ပြည့်ဝတဲ့..သွေးအသစ်တွေကို..နှလုံးရဲ့ဘယ်ဘက်သွေးဝင်ခန်းက..လက်ခံရယူပြီး..နှလုံးရဲ့ဘယ်ဘက်သွေးလွှတ်ခန်းကနေ..သွေးလွှတ်ကြောမကြီးမှတဆင့်..ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့သွေးအသစ်များ..ရောက်ရှိအောင်..ညှစ်ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်.. […]
May 30, 2021 Cele Fans 0
မိုးရွာတော့မည် ပြီးခဲ့သည့်ရက် သောကြာ‌နေ့ညနေပိုင်းက စတင်ပြီး အနောက်တောင်မုတ်သုန်လေသည် ဧရာဝတီတိုင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းနှင့် ပဲခူးတိုင်းတောင်ပိုင်းတွေကိုလွှမ်းခြုံသွားခဲ့ပြီးနောက် ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်း ချင်းပြည်နယ်၊ အရှေ့ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တို့အထိ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ မိုးကုတ်မြို့တွင် လျပ်စီးမုန်တိုင်းပါကျရောက်နိုင်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်ကမြို့များဖြစ်သည့် လားရှိုး၊ မူဆယ်၊ နမ့်ဆမ်စသည့်မြို့များနှင့် ရှမ်းပြည်တခွင်မိုးများမည်ဖြစ်ပြီး ချင်းပြည်နယ်တွင်လည်းမိုးများစွာရွာသွန်းပါလိမ့်မည်။ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်းနှင့် မန္တလေးတိုင်းတို့တွင်လည်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်မှ မိုးတိမ်များစတင်ရွေ့လျားလာနေပြီ ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် မိုးစတင်ရွာသွန်းပါတော့မည်။ TTK / မြေငလျင်၊ မုန်တိုင်း၊ မီးတောင်နှင့် ရာသီဥတုသဘာဝ သတင်းများ။ […]
ညစ်ပတ်နေတဲ့ပုံးတစ်လုံးနဲ့ စားစရာမရှိလို့ ဆွမ်းကျန်တွေလာတောင်းတဲ့ အဖွားအိုရဲ့ စိတ်မကောင်းစရာအဖြစ်အပျက်
လက်ရှိ အခြေအနေတွေကြောင့် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က ပြည်သူတွေမှာစားဝတ်နေရေးအပြင် အခက်အခဲတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရတာလည်း တော်တော်များများသိမြင်ကြမှာပါ..။ တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲကြီးမှာ အသက်ပေးသွားကြတဲ့ အသက်ပေးရင်း ဆက်လက်တော်လှန်နေကြတဲ့ သူရဲကောင်းပြည်သူတွေရှိသလို မိသားစုတွေတစ်ကွဲတစ်ပြားနဲ့ အိုးပစ်အိမ်ပစ်နဲ့ စစ်ဘေးရှောင်နေကြရသူတွေလည်းရှိကြတာမို့ ပြည်သူတွေက အချင်းချင်းကူညီလှူဒါန်းနေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်..။ ဒီကနေ့မှာတော့ အသက်အရွယ်အိုမင်းနေသလို လတ်တလောအခြေအနေတွေကြောင့် သားတွေနဲ့ ဝေးကွာနေပြီး တစ်ယောက်တည်းခက်ခက်ခဲခဲဖြတ်သန်းနေရတဲ့ အဖွားတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်မကောင်းစရာ အကြောင်းအရာလေးတွေကို အသိပေးပြောပြချင်ပါတယ်..။ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက် ကူညီလှူဒါန်းပေးဖို့သွားရင် တွေ့ခဲ့ရတဲ့ရှမ်းလူမျိုးအဖွားတစ်ယောက်ကတော့ စားစရာမရှိလို့ ညစ်ပတ်နေတဲ့ပုံးတစ်လုံးနဲ့ ဆွမ်းကျန်တွေလာတောင်းရင်း ကြုံတွေ့ခံစားနေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိ​ု […]
ကလေးများ အနေခက်အောင် ရင်ကြပ်နေသော် ငွေသိန်းသောင်းချီ မကုန်မယ့်နည်း
အခုပြောပြပေးချင်တာကတော့ ငွေကုန်ကြေးကြမများဘဲ လွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်တဲ့ဆေးနည်းလေဖြစ်ပါတယ်တကယ်လက်တွေ့အသုံးဝင်တာမို့ စမ်းကြည့်သင့်ပါတယ် ပြုလုပ်ရလည်းလွယ်ပါတယ် ကလေးများ အင်ခတ်အောင် ရင်ကျက်နေသော် ပုံမှာပြထားတဲ့ သင်္ဘောနံနံ ၃ ရွက်ခန့် ကွမ်းရွက် ၃ ရွက်ခန့်ကို နွမ်းရုံတင်လေး မီးသင်းပေးပီး ပန်းကန်လုံးထဲ သတ္ထုရည်ရအောင်ညှက်ပီး ဒီဇယ် ၃ စက်ခန့်ရောပါ ရင်ကျပ်နေတဲ့ ကလေးရဲ့ ရင်ပါတ်နှင့် နောက်ကြောတို့ကို နှန့်အောင်လိမ်းပေးပါ မီးနစ်အနည်းငယ် အတွင်းသက်သာပျောက်ကင်းပြီး ကောင်းစွာ အသက်ရှူနိုင်ပါမည် ကိုယ်တွေ့မို့ မျှဝေပေးပါသည်အောင်စိုး အသုံးဝင်တယ်ဆိုရင် အများသူငါ […]